शीर्षक यो लेख “जुरासिक विश्व ट्रेलर: आफ्नो खतरा मा डायनासोर डीएनए संग गडबड” Lanre Bakare द्वारा लेखिएको थियो, लागि theguardian.com मंगलवार 25 नोभेम्बर मा 2014 19.15 UTC
अब तपाईंलाई नवीनतम फिलिम लागि "उचित" ट्रेलर हेर्न सक्नुहुन्छ - जो तपाईं जुरासिक विश्व भन्दा अन्य बिल्कुल केहि डायनासोर सुविधा हुनेछ भन्नुभयो - तपाईं 15-दोस्रो टिजर थियो गर्नुभएको को प्रागैतिहासिक मताधिकार. यहाँ परिसर आधारभूत छ. सेट 22 मूल पछि वर्ष, अब आमाबाबुले जुरासिक विश्व गर्न यात्राहरूमा बन्द आफ्नो बच्चाहरु पैकिंग छन्, एक विषय पार्क / डिनो-प्रयोगशाला डिज्नील्याण्ड र SeaWorld बीच एक क्रस जस्तै देखिन्छ कि.
यो ट्रेलर एक आमाले छोरा खरानी बताउन त्यो "यस यात्रामा जाँदै लागि उहाँलाई गर्व" साँच्चै हो संग बन्द पछीको, साना केटा उत्तेजना को चार्ली र चकलेट फैक्टरी-स्तर संग आफ्नो टिकट हेर्छ रूपमा. त्यो उत्तेजना केहि पनि साँच्चै sinister लाइन संग बच्चाहरु बन्द पैकिंग आमा द्वारा रोक्न छ: "सम्झनु. केहि तपाईं chases भने ... चलाउनुहोस्। "जब एक velociraptor fancies सानो खैरो मा chomping पक्का सल्लाह पछि आउनेछ.
चाँडै बच्चाहरु जुरासिक विश्व तिर पठाइएको नौका मा बन्द पैक र, जो एक अशुभ टापुमा छ. भित्र मानव Pals / भविष्य नाश्ता बीच निःशुल्क रोमिङ छन् कि डायनासोर को भार छन्. तपाईं एक sarcosuchus जस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा देख्न सक्नुहुन्छ हाम फाल्न अप र एक सार्क खान! तपाईं सानो orbs मा वरिपरि रोल गर्न सक्नुहुन्छ (gyrospheres) र डायनासोर मा gawp! तपाईं पनामा टोपी पनि लगाउने र सामान्य विषय पार्क मा जस्तै अप लाममा गर्न सक्नुहुन्छ!
यो अलिकति घमण्डी वैज्ञानिक अप देखाउँछ र भन्छ जब कुराहरू एक बिट गाढा प्राप्त: "विगतमा हामीले दशकमा थप हड्डी माथि खन्नुहोस् एक शताब्दीमा भन्दा जेनेटिक्स सिक्नुभयो।" न्यायसङ्गत, तर त्यसपछि हामी कुराहरू वरिपरि यो समय गडबडा जाँदैछन् कसरी र किन गर्न रूपमा संकेत प्राप्त. "पूरै नयाँ फ्रंटियर खोल छ. हामी हाम्रो पहिलो आनुवंशिक परिमार्जन संकर एक आनुवंशिक रूप देखि संशोधित हाइब्रिड छ। ", हरे शिव. म यो दाबीले र साँच्चै बलियो हुन गइरहेको छ भने आश्चर्य र मानिसहरूले एक भोक छ?
क्रिस प्राट्ट / अर्थमा कुरा गर्न incredulously आफ्नै संग वैज्ञानिक गरेको पहिले नै संक्षिप्त शब्दहरू बारम्बार हात मा छ: "तपाईं बस गए र नयाँ डायनासोर सिर्जना? सायद एक राम्रो विचार ". तपाईं भन्नुहुन्न, क्रिस. तपाईं प्राट्ट थाहा अर्को कुरा टापु खाली गर्न आवश्यक भन्दै छ, मान्छे बन्द छानिएको हो रहे र एक पटक Placid वैज्ञानिक कराउन छ "RUNNNNNN!"पहिले देखि नै पेट्रीफाइड बच्चाहरु मा.
तपाईं मूल मनपराएका र क्रिस प्राट्ट लागि जेफ Goldblum गमागमन आपत्ति छैन भने - जो सायद छैन त खराब छ - त्यसपछि जुरासिक विश्व एक यात्रा हुन सक्छ लायक, सानो धैर्य भएकाहरूले लागि यो थप Groundhog दिन जस्तै तर सट्टा आनुवंशिक रूप देखि संशोधित हाइब्रिड डायनासोर बिल मुरे र Jokes संग हुनेछु.
जो सबै भन्दा राम्रो टिभी र चलचित्रहरु स्ट्रिम सेवा छ?